Windows 10 inogona kuenderana neApple maapplication muna 2021 | Linux Vakapindwa muropa
Kwenguva yakati ikozvino, vashandisi veLinux vanowanikwa Bhokisi, software inotibvumidza kuisa uye kumhanyisa Android kunyorera. Ndicho chinhu chimwe chete icho vanogadzira vari kuwedzera kuLinux-based mafoni uye mapiritsi kuti vakwanise kuisa Android maapps uye nekuwedzera huwandu hwesarudzo. Dai zvese zvaive nyore uye zvakachena, ndingadai ndave ndichishandisa pane imwe malaptop angu neLinux, asi chii chiri chokwadi ndechekuti ndichaishandisa pane yandiinayo Windows 10 kana yakasimbiswa makuhwa ekupedzisira.
Uye ndizvozvo Windows 10 haisi chete inowirirana neLinux, asi mune ramangwana zvinogona kuzoita saizvozvo Mapurogiramu eApple. Muchokwadi, kuzvishandisa kungave kuri nyore sekuenda kuMicrosoft Store nekuzviisa, sezvatinogona kuita nevamwe (vanozvarwa paWindows) senge nharembozha yeVLC kana Windows Terminal. Maererano nerunyerekupe, ichi chitsva chaizosvika muna 2021, kunyange pasina chinhu chakasimbiswa. Izvo zvinoita sekunge zvine chokwadi ndechekuti kambani inotungamirwa naSatya Nadella iri kuyedza nayo.
Windows 10: yakawanda software, asi ...
Pepa, varidzi kana marezinesi akapatsanurwa, Windows 10 ndiyo yakasarudzika system yekushandisa. Nayo tinogona kuisa zviripo zvese zviripo software, pamwe nemitambo yese yedesktop iri pasi. Kune zviri pamusoro zvakawedzerwa WSL, iyo inotibvumidza kumhanya maLinux maapplication, munguva pfupi iine interface, uye pamwe muna 2021 tinogona kushandisa maapplication eApple atinogona kurodha pasi kubva kuchitoro chepamutemo cheMicrosoft, asi Windows ichagara iri Windows.
Yeyekupedzisira, kunyanya, ini ndakaisiya seyakagadzika yekushandisa system makore gumi nemana apfuura. Kuita ndiko kwakaipisisa. Muchokwadi, izvozvi ndiri kunyora chinyorwa ichi nelaptop ine i14 processor uye 3GB ye RAM ine Manjaro xfce-usb, uye komputa inoshanda zvakakwana. Nekudaro, pandinoda kuita chimwe chinhu muWindows, ndinopererwa; iyo kombiyuta inokambaira. Izvi hazvigadzirise zvakanyanya sezvazvinoenderana neApple maapplication, asi pachangu ndingadai ndisina kutsamwa kana Linux ikaita chimwe chinhu chakafanana chinovandudza nekurerutsa Bhokisi.
Chero zvazvingava, runyerekupe runofanira kusimbiswa. Uye kune iye "anovenga" ari pabasa ndiani achati iyi ibhurogu nezveLinux, muyeuchidze kuti isu tine chikamu uko iyi nhau inokodzera zvakakwana. Izvo uye chii Android yakavakirwa paLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Windows 10 inogona kuenderana neApple maapplication muna 2021